Vaovao - Ny tsenan'ny trigger sprayer dia hahita fotoana fitomboana tsara mandritra ny vanim-potoana fanombanana 2021-2031 ao ambadiky ny fiakaran'ny fangatahana noho ny fananany be dia be.
Ny fitomboan'ny fahatsiarovan-tena momba ny fampiasana tsimokaretina trigger amin'ny hetsika isan-karazany dia hanaporofo fa mpanafaingana ny fitomboana lehibe mandritra ny vanim-potoana vinavina 2021-2031.
Trigger sprayers dia ampiasaina amin'ny famafazana karazana ranon-javatra samihafa. Amin'ny ankapobeny dia vita amin'ny plastika polypropylène (PP) izy ireo. Ny trigger lever, rehefa misintona dia mitarika ho amin'ny fampahavitrihana ny paompy kely, izay mifatotra amin'ny fantsona plastika. Ny hetsika fitrandrahana ateraky ny fisintonana ny lever dia manery ny fluid hivoaka ho toy ny rafitra tokana. Ny sprayers trigger dia azo amboarina ary ahafahan'ny mpanjifa manitsy ny karazana tifitra toy ny mahery na zavona tsara. Ireo anton-javatra ireo dia manampy amin'ny fampitomboana ny vola miditra manerana ny tsenan'ny trigger sprayer.
Ny tsenan'ny mpamboly trigger dia tombanana hiitatra amin'ny CAGR amin'ny ~ 4 isan-jato mandritra ny fe-potoana 2021-2031 araka ny famakafakana nataon'ny ekipa Transparency Market Research (TMR). Ny tsenan'ny mpijirika trigger eran-tany dia mitentina 500 tapitrisa dolara mahery tamin'ny taona 2020 ary naverina nihoatra ny tomban'ny $ 800 tapitrisa tamin'ny faran'ny vanim-potoana vinavina, izany hoe 2031.
Ny mpanamboatra ao amin'ny tsenan'ny trigger sprayer dia manangana endrika sy fanamboarana vaovao mba hampitomboana ny fidiram-bolany. Mifantoka tanteraka amin’ny asa fikarohana sy fampandrosoana ho amin’izany ihany koa izy ireo. Ny fitomboan'ny fampiasana sprayers trigger amin'ny fanadiovana mandritra ny valan'aretina COVID-19 dia ho toy ny mpanentana fitomboana lehibe ho an'ny tsenan'ny trigger sprayer.
Mikaroka pejy 135 amin'ny fikarohana faran'izay tsara, scenario tsena ankehitriny ary vinavina ara-jeografika. Mahazoa fomba fijery momba ny tsenan'ny Trigger Sprayer (karazana: Standard Trigger Sprayers sy Chemical-resistant Trigger Sprayers; Haben'ny Tenda: 28/400, 28/410, 20/410, 24/410, ary ny hafa; Fampiharana: Kosmetika & Fikarakarana manokana, Sakafo & zava-pisotro, vokatra fanadiovana sy famonoana otrikaretina, fikarakarana fiara, vokatra zaridaina, ary ny hafa; ary fantsona fizarana: an-tserasera sy ivelan'ny Internet) - Famakafakana, habe, fizarana, fitomboana, fironana ary vinavina, 2021-2031 amin'ny fanavaozana sy famoahana vokatra vaovao ho Mpampitombo ny fitomboana.
Miaraka amin'ny fitomboan'ny fangatahana amin'ny trigger sprayers, ny mpilalao dia mifantoka amin'ny famoahana vokatra vaovao izay mahasoa kokoa sy mety ho an'ny mpampiasa farany. Ohatra mahazatra ireo mpitsindroka trigger mora noforonin'ny PIVOT. Ny mpangalatra trigger noforonin'ny PIVOT dia manana mpanodina trigger misy patanty izay manana tohotra 180 degre eo anelanelan'ny tavoahangy sy ny tahony. Afaka mitongilana amin'ny lafiny rehetra. Ny fivoarana toy izany ataon'ny mpilalao amin'ny tsenan'ny trigger sprayer dia manampy amin'ny fampivoarana ny tahan'ny fitomboana.
Famakafakana ny fitomboan'ny tsenan'ny sprayer eran-tany any amin'ny firenena 30+ ao anatin'izany ny Etazonia, Kanada, Alemana, Royaume-Uni, Frantsa, Italia, Russia, Polonina, Benelux, Nordic, China, Japan, India, ary Korea Atsimo. Mangataha santionan'ny fianarana
Ny indostrian'ny kosmetika hamafy ny voan'ny fitomboana manerana ny tsenan'ny Trigger Sprayer
Nitombo be ny fangatahana sprayers trigger amin'ny indostrian'ny kosmetika noho ny tombony azony. Ny sprayers dia mampihena ny fandaniam-poana ny vokatra kosmetika. Ny mpanamboatra ao amin'ny tsenan'ny trigger sprayer koa dia manamboatra sprayers azo zahana araka ny takian'ny mpampiasa farany, izay manampy kintana fanampiny amin'ny fitomboana.
Ny fitomboan'ny fampiasana kosmetika noho ny fitomboan'ny fahatsiarovan-tena momba ny maha-zava-dehibe ny fanolorana tena eo anatrehan'ny hafa dia ho toy ny fanamafisam-peo ho an'ny tsenan'ny trigger sprayer.
Ny valan'aretina COVID-19 dia nanimba ny fahafaha-mitombo manerana ny tsenan'ny trigger sprayer amin'ny ankapobeny. Ny fampiharana ny fameperana fanakatonana sy ny fanakatonana ireo tobim-pamokarana dia niteraka fatiantoka goavana. Na izany aza, ny fampiasana ny trigger sprayer ho an'ny tanjona fanadiovana dia mamadika ny latabatra fitomboana. Mba hisorohana ny fifindran'ny COVID-19 dia ilaina ny manadio ny trano rehetra, indrindra ny toerana ho an'ny daholobe. Io anton-javatra io dia nampitombo ny fangatahana trigger sprayers, izay hanampy amin'ny fampivoarana ny fahatsinjovana ny fitomboana.